We She Me: ဟင်းသီးဝလံ မီးဖုတ်သုပ်
သက်သတ်လွတ် စားနေတဲ့ သူတွေအတွက် အနောက်တိုင်း အရသာ အသုပ်တစ်မျိုးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း အရသာ ဆိုပေမယ့် မြန်မာလျှာနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မီးဖုတ်သုတ်ပါ။ မြန်မာစာ ခရမ်းသီး မီးဖုတ်သုပ်လိုလိုပေါ့။ တူတာ ပြောပြတာပါ အရသာတော့ ကွာပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သီးနှံဝလံတွေကတော့
ဖရုံသီး တစ်ခြမ်း - Butternut Pumpkin ရှည်ရှည်မျိုးဆို အရသာကောင်းပြီး အနံ့ မပြင်းပါဘူး။
ခရမ်းသီး ပုလုံးလုံး တစ်လုံး - ခရမ်းသီးက အရှည်မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အရှည်မျိုးက ဟင်းချက်စားရင် ပိုကောင်းတယ်။
ငရုတ်ပွ - ကြိုက်တဲ့ အရောင် ထည့်ပါ။ ဈေးနည်းနည်း ပိုကြီးတဲ့ အနီရောင်ကတော့ ပိုမွှေးတယ်။
မှို (မထည့်လည်း ရပါတယ်)
ဇူခီးနီး (Zucchini) (မထည့်လည်း ရပါတယ်) - ဇူခီးနီးက ဘူး၊ ဖရုံမျိုးပါပဲ။ အရသာ ချိုပါတယ်။ နွယ်က သီးရင် ၀လံ ဆိုတော့ ဖရုံသီးနဲ့ ဇူခီးနီးက ၀လံတွေပေါ့။
ဆလပ်ရွက် ဆလတ်ရွက် ရောရာ - Salad လုပ်စားတဲ့ အရွက်တွေ ၃-၄ မျိုး ရောထားတဲ့ အထုတ်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ မရနိုင်ရင်လည်း Iceberg Lettuce ဆလပ် တစ်ထုတ် ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Artichoke Heart - ဂေါ်ဖီထုပ်လိုလို အဖူးပါ။ အထဲက အဆံကို အချဉ်တည်ထားတဲ့ ပုလင်းတွေ ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။ စာဖတ်သူ တစ်ဦးက ဖြည့်စွက်သွားပါတယ်။ "artichoke ဆိုတာ ဆူးလေသီးပါ။ ဆူးလေပင်က သီးတဲ့ ဆူးလေသီးပါတဲ့ရှင်။"
သီးနှံတွေကို မလှီးခင် ရေဆေးလိုက်ပါတယ်။ ခရမ်းသီးကို အရှည်လိုက် မထူမပါး လှီးပါတယ်။ ဇူခီးနီးကိုလည်း တ၀က်ဝက်ပြီး အရှည်လိုက် လှီးပါတယ်။ ဖရုံသီးကို အခွံခွာပြီး လက်တစ်ဆစ် ပတ်လည် အတုံးလေးတွေ တုံးပါတယ်။ ငရုတ်ပွ အစိမ်းရောင် ဖြစ်ဖြစ် အနီရောင် ဖြစ်ဖြစ် နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်ဖြစ်ကို ၄-၅ စိပ် စိပ်ပြီး အစေ့တွေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလည်း ၄-၅ စိပ် စိပ်ပြီး အစေ့တွေ အနှစ်တွေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ မှိုတွေကို လေးစိတ် စိတ်လိုက်ပါတယ်။
လှီးထားတာတွေ အားလုံးကို ဗန်းထဲ ထည့်ပြီး Oven ထဲမှာထည့် ၂၀၀ စင်တီမှာ မိနစ် ၂၀ လောက် ဖုတ်လိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက အိမ်တချို့မှာ Oven အကြီးစား မရှိတတ်ရင်လည်း Toaster Oven နဲ့ ဖုတ်လည်း ရပါတယ်။ လှီးပြီး ဗန်းထဲ ထည့်လိုက်ရင် များနေတယ် ထင်ရပေမယ့် ဖုတ်ပြီး သုတ်လိုက်ရင် တ၀က်တောင် မကျန်ချင်ပါဘူး။ မှန်းရ လွယ်အောင် ပြောပါတယ်။
ဖုတ်ထားတဲ့ သီးနှံတွေရယ်၊ ဆလပ်ရွက် ဆလတ်ရွက် ရောရာရယ်၊ အာတီချုပ် အဆံရယ်၊ သံလွင်ဆီ သင့်တော်ရုံ(တခြား အနံ မပြင်းတဲ့ ဆီလည်း ရပါတယ်) ရောပြီး ထည့်ထားတာကို French Dressing သင့်တော်ရုံ၊ ဆားနည်းနည်း ထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ရင် ဆလပ်က ဆဲလက်ဒ်က အဆင်သင့် စားလို့ ရပါပြီ။ အာတီချုပ် အဆံက အချဉ်တည်ထားတာမို့ အချဉ်ကဲပါတယ်။ Dressing ကလည်း ချဉ်တတ်လို့ ထိန်းထည့်ရပါတယ်။ ဖရုံသီး မီးဖုတ်က စိမ့်စိမ့်နဲ့ အာတီချုပ်က အချဉ်နဲ့က သူ့ဘာသူ ထိန်းသွားပြီး စားမြိန်ပါတယ်။ ထောပတ်ထမင်း အုန်းထမင်းလို အအီစာတွေနဲ့ အင်မတန် လိုက်ဖက်တဲ့ အသုပ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းနွေးစရာ ဟင်းချိုတစ်ခွက် (Pumpkin Soup)
Anonymous - 2/22/09, 1:21 AM
အော် ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်သူမှ မရေးရသေးလို့ ခြေရာလေးချန်သွားလိုက်တယ်း)
Phyo Evergreen - 2/22/09, 4:21 AM
နုသွဲ့ - 2/22/09, 8:10 AM
French dressing ကို ခံစားလို့ မရဘူး။ သူ့ကို နည်းနည်းပဲ ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်ဦးမယ်။ ကျေးဇူး။ Healthy diet ပိုစားမလားလို့ရယ်...ဟိ။
sin dan lar - 2/22/09, 12:51 PM
French Dressing သိပ်မကြိုက်လို့ ၊ အသီးဝလံတွေတော့ အကုန်ကြိုက်
နည်းပျက်( ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်လုပ်သောနည်း) နဲ့ သုတ်စားကြည့်မယ်...။
Moe Cho Thinn - 2/23/09, 5:55 AM
တို့ကတော့ အသီးအရွက် ဆို မစားချင်လို့ စားတတ်အောင် ကျင့်စားနေရတယ်။ ခေတ်မီဥာဏ်ရှိသူတိုင်း ကျန်းမာရေး အတွေးအခေါ် ရှိကြတယ်။ တို့ကတော့ healthy food ဆို ရှောင်တယ် လို့ ပြောရမလားပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်လဲ မကောင်းမှန်း သိပါတယ်။ ကြိုးစား စားကြည့် ပါအုံးမယ်။
nu-san - 2/25/09, 11:32 PM
Andy ရေ.. အဲဒီလို salad တွေကို ဒီမှာတော့ အရမ်းစားကြတယ်... အမကတော့ ရုံးက ပါတီတွေ ဘာတွေ ရှိလို့ ဆိုင်မှာ လိုက်ကျွေးရင်တော့ စားလိုက်တာပဲ.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ မလုပ်စားဖြစ်ဘူး.. :P
ဘာလိုလိုနဲ့ မြတ်နိုးလေး မွေးနေ့ ရောက်တော့မယ်နော်.. မိသားစုတွေ ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိတုန်း.. ကလေးတွေ ပို့စ်တောင် မဖတ်ရတာ ကြာပေါ့.. :)
Ko Paw - 2/26/09, 12:47 PM
<<<“ဆားနည်းနည်း ထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ရင် ဆလပ်က အဆင်သင့် စားလို့ ရပါပြီ။”>>>
ကိုအင်ဒီရေ…. အဲဒီမှာ ကိုအင်ဒီ ပြောတဲ့ “ဆလပ်”က အရွက်ကို ရည်ညွှန်းတာလား။ ဒါမှမဟုတ် Salad (ဆဲလက်ဒ်) ကို ပြောတာလား။
ကျနော်မေးရခြင်းအကြောင်းက…… ကျနော် ၉ တန်းကျောင်းသားအရွယ် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကို စဖတ်ဘို့ ကြိုးစားနေစဉ်က ၀တ္ထုထဲမှာ အဲဒီ Salad ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ့ရင် ဆလပ် လို့ပဲ အသံထွက်လိုက်တယ်။ ဥပမာ…Salad တပွဲမှာတယ်ဆိုတာမျိုး ဖတ်ရရင်….အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ဆလပ်ရွက် တပွဲမှာစားတယ်လို့ ထင်ကြေးနဲ့ ဖြီးဖြန်းဘာသာပြန်လေ့ရှိတယ်။ ဒစ်ရှင်နရီမကြည့်ဘဲ ရမ်းတုတ်တာ။ အသံထွက်ကိုလည်း ဒစ်ရှင်နရီမှာ မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အဲသည်လို ဒစ်ရှင်နရီမကြည့်ဘဲ စိတ်မှန်းနဲ့ ရမ်းကျိတ်လိုက်တဲ့ အသံထွက်တွေက ကျနော့်မှာ ကြွယ်ဝတဲ့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှ တချို့အသံထွက် တွေက တက်တက်စင်အောင် လွဲနေတာကို တွေ့လာရတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပြောရင် နိုင်ငံခြားသားတွေက နားမလည်တာဖြစ်မယ်။ အစကတော့မသိဘူး….ဒီကောင်တွေ ကိုယ့်လောက်မှ စကားလုံးမကြွယ်ဝလေခြင်းပေါ့။း-)
ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်းရောက်တော့ ဘီဘီစီက အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခွေတွေမှာ ဆဲလက်ဒ် လို့ အသံထွက်တာကို စပြီး သတိထားမိတယ်။ စင်္ကာပူမှာလည်း ဆဲလက်ဒ် ပဲ ထွက်ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ရောယောင်ပြီး ဆဲလက်ဒ် လိုက်တာပေါ့။ ဒစ်ရှင်နရီကို အခုထိ မကြည့်ရသေးဘူး။
ဒီလိုနဲ့ “ဆဲလက်ဒ်” ပြောလာလိုက်တာ ဟိုးတလောကတော့ ဂျူးရဲ့ “မက်ဆီကန်အလံ ပန်းသီးသုပ်” (ထင်ပါရဲ့) ၀တ္ထုတိုထဲမှာ ဂျူးကလည်း သစ်သီးဟင်းရွက်သုပ်ကို အရင်တုန်းက ကျနော်ထွက်သလိုပဲ “ဆလပ်” လို့ ထွက်ထားတာကို တွေ့ရပြန်ပါရော။
ကျနော်သိချင်တာက…. Salad ကို “ဆလပ်” လို့ အသံထွက်တာ ရှိသလားဆိုတာရယ်…. ဒါမှမဟုတ် မြန်မာတွေက မြန်မာသံ ဖလှယ်ပြီး “ဆလပ်” လို့ ခေါ်ကြတာလား… ဒါမှမဟုတ် ကျနော့်လိုပဲ အသံထွက်မှားနေတာလား။
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ မရှင်းလင်းဘူး။ အချိန်ရရင် ဦးဦးအင်ဒီ ဖြေကြားပေးပါ။
Andy Myint - 2/26/09, 11:31 PM
ကိုပေါ ခင်ဗျာ.. ပြောရမည်ဆို ကျွန်တော်လည်း အသံထွက် မကောင်းဘူး။ `ဖိုနက်တစ်´ ကောင်းကောင်း မလေ့လာဘူး။ (ပြောရင်းဆိုရင်းတောင် မှားနေပြီ)။ အားထုတ်ပြီး ပီအောင် မပြောဘူး။ ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်။ ပီအောင် ပြောရမှာကိုတောင် ရှက်နေသလိုလို။ Salad က 'a' ကို Father က 'a' လို ဆားလက်ဒ် ထွက်သလား မေးတာ ရှိတယ်။ Salad နဲ့ Ballad (ဘဲလေး အက Ballet မဟုတ်။ အချစ်သီချင်း) နဲ့ အသံတူတယ် ဆိုတော့ ကိုပေါ ပြောသလို `ဆဲလက်ဒ်´ ကမှ အမှန်ပါပဲ။ သိပ်ပီအောင် ရေးရင် လူအမြင်ကပ်မှာ စိုးတာရယ် .. (မေတ္တာဦး တူးရစ် ရေးသလိုပေါ့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အတွေးခေါင်တာပါ) ဆလပ်ရွက် (တကယ်တော့ Lettuce - လက်တက်စ်) နဲ့ ရောချလိုက်တာရယ် အသုပ်ကိုပါ အရွက်လိုမျိုး `ဆလပ်´ လိုက်တာပါ။ မြန်မာလိုတောင် စားလုံးပေါင်းက မှားလိုက်သေးတယ်။ `ဆလတ်ရွက်´ ဖြစ်ရမှာပဲ။ အကုန်လုံး ပြန်ပြင်လိုက်မယ်။
ကောမန့်ရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မပန်းအိ
စားကြည့်ပါဦး Phyo Evergreen ။ မြန်မာစာပဲ စားတတ်တဲ့ ယောက္ခမ (အမေ) တောင် ကြိုက်သွားတာနော်
French Dressing ကို အရွက်တွေရယ် အာတီချုပ်ရယ်က ဖုံးသွားတယ် မနုသွဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ။
ငံပြာရေလေး ငရုတ်ဆီလေးနဲ့ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန် သုပ်စားကြည့်ပါလား မ Sin Dan Lar .. ဟီးဟီး နောက်တာ
အသီးအနှံ မစားတတ်တဲ့ သူကတော့ ဟင်းရွက်စိမ်းနံ့ကို မခံစားနိုင်တာ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ မချိုသင်း
ဟုတ်တယ် မနုစံရေ အချိန်တွေက သိပ်မြန်တယ်။ သမီးတောင် ၂ နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ကလေးတွေ အကြောင်းကလည်း များလွန်းတာနဲ့ မရေးဖြစ်တော့တာ အဟီး
Studying Medicine in AU and US